အင်းးးးးးအင်းးးး အားးးးး အားးးးးအသံဖိုင်က ဝေဠုကျော်သွင်းခိုင်းလို့ သွင်းထားခဲ့တာလို့ သင်းသင်းပြော ….. (ရုပ်သံ) ….. - CeleLove
အင်းးးးးးအင်းးးး အားးးးး အားးးးးအသံဖိုင်က ဝေဠုကျော်သွင်းခိုင်းလို့ သွင်းထားခဲ့တာလို့ သင်းသင်းပြော ….. (ရုပ်သံ) …..
June 5, 2019 Cele Love အနုပညာလောက 0
အသံဖိုင်က ဝေဠုကျော်သွင်းခိုင်းလို့ သွင်းထားခဲ့တာလို့ သင်းသင်းက ပြောပါ တယ် …။
ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သရုပ်ဆောင်ဝေဠုကျော်နဲ့တရားလိုသင်းသင်းတို့ရုံးချိန်းမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဝေဠုကျော်တင်သွင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသံဖိုင်သက်သေတခုအကြောင်းကအများကြားမှာပြောစရာတခုအဖြစ်ပျံ့နှံ့နေတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် …။
ဒီလိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာပျံ့နှံ့နေတဲ့သမီးရည်းစားအသံများပါဝင်တဲ့အသံဖိုင်ကတော့ဝေဠုကျော်ကအသံသွင်းခဲ့တာကြောင့်သင်းထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သင်းသင်းကပြောပါတယ် …။
“ဒီအသံဖိုင်က ဝေဠုကျော်သွင်းခိုင်းလို့သွင်းပါတယ်။ဝေဠုကျော်မှာလည်းဒီအသံဖိုင်ရှိပါတယ်။ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ကြိုက်ခဲ့တုန်းက ချစ်သူရည်းစားလေ စပွန်ဆာထားနေတာမဟုတ်ဘူး။ ချစ်သူရည်းစားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးခဲ့တာအဲဒါမှားလို့လား ….?
ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းကိုယ့်လိုမိန်းကလေးမျိုးတွေသမီးရည်းစားထားရင်သိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒါလေးပြောပြချင်တာပါ” လို့ တရားလိုဖြစ်သူ အလှမယ်သင်းသင်းကပြောပါတယ် …။
မိန်းမတယာက်အနေနဲ့အရှက်သိက္ခာအကျခံပြီးကိုယ့်သဘောဆန္ဒနဲ့အသံသွင်းထားမှာမဟုတ်ဘဲချစ်သူရည်းစားဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ပြောတာကို လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် …။
“အသံဖိုင်ကဝေဠုကျော်ဖမ်းခိုင်းလို့ဖမ်းတာ။ဝေဠုကျော်ဆီမှာလည်းရှိတယ်။သင်းသင်းဆီမှာလည်းရှိတယ်။ကိုယ့်ထက်သိတတ်နားလည်တာတွေရှိလို့ ကျမရှေ့နေကိုအကုန်ပေးထားပြီးသား။ သူလိုအပ်လို့သူတင်တာလေ။ ကျမနဲ့ပတ်သက်ခဲ့စဉ်က ချစ်သူတယောက်အနေနဲ့ ဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါဆိုတော့ ကျမလုပ်မှာပေါ့။ ချစ်ကြိုက်နေတဲ့အချိန်ေ …။
ဒါတောင်ဗီဒီယိုရိုက်ချင်တာလေ။ မြန်မာမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ရှက်လို့။ အဲဒီအသံဖိုင်လေးကိုခွင့်ပြုလိုက်တာ ” လို့ သင်းသင်းကပြောပြ ပါ တယ် …။
ယနေ့ဇွန်လ၅ရက်နေ့ရုံးချိန်းကိုတော့စွပ်စွဲခံသူဝေဠုကျော်ဘက်မှပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးဝေဠုကျော်ရဲ့ရှေ့နေမှလည်းတရားရုံးတွင် ရုံးကင်းလွတ်ခွင့်ကို တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် …။
“သူတို့ဘက်ကအမှုကိုအမြန်ပြီးချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ရုံးကင်းလွတ်ခွင့်တင်တယ်။ရုံးကိုအစကတည်းကမလာချင်ဘူးဆိုရင်ဝေဠုကျော်ကတရားခံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြစ်မှုကိုမကျူးလွန်နဲ့ပေါ့။အဲဒါပဲပြောချင်တာပါ။သူ့မှာလည်းလူမှုရေးရှိသလိုကျမမှာလည်းရှိတယ်။ ကျမတို့က ပိုဆိုးပါတယ်။ ဘဝသမားတွေပါ။ တနေ့လုပ်မှ တနေ့စားရတဲ့ဘဝ …။
ကျမတောင်ရုံးချိန်းမှန်အောင်တက်နိုင်သေးတာပဲ။ရှေ့နေတယောက်အနေနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးထင်တယ်။ဒီလျှောက်လဲချက်ကိုပယ်ဖျက်မှာပဲ” လို့ သင်းသင်းကပြော ပါ တယ် …။
တဖက်ကရှေ့နေရဲ့တရားခွင်မှာမဆင်မခြင်ပြောတဲ့စကားများကြောင့်သင်းသင်းဘက်မှတရားရုံးပြောင်းဖို့အထိဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ လည်း သိ ရ ပါ တယ် …။
“သင်းသင်းကတရားသူကြီးကိုယုံတယ်။သူ့ရဲ့သီလသမာဓိသိက္ခာကိုယုံတယ်။အမှန်တရားယုံတယ်။အမှန်တရားအသွားတယ်။တိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းတဖက်ကရှေ့နေကြောင့်တိုင်မှာပဲ။တဖက်ကရှေ့နေလည်းစကားကိုဆင်ခြင်ပြောပါ။တရားခွင်မှာဆင်ခြင်မပြောလို့ ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ရုံးပြောင်းဖို့အထိဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ရုံးပြောင်းပြီးရင်တိုင်မှာပါ” လို့ သင်းသင်းကပြောပါတယ်။
အဆိုပါအမှုကိုတော့ အလှမယ်သင်းသင်းမှ ဇန်နဝါရီ၈ရက်နေ့ကစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝေဠုကျော်ကတော့ငွေကျပ် သိန်း၅၀ဖြင့် အာမခံရယူကာ အမှုရင်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် …။
နောက်တကြိမ်ရုံးချိန်းကိုတော့ ဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့ကို ပြန်လည်ချိန်းဆိုထား တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် …။ ။
The Irrawaddy Lifestyle
အငျးးးးးးအငျးးးး အားးးးး အားးးးးအသံဖိုငျက ဝဠေုကြျောသှငျးခိုငျးလို့ သှငျးထားခဲ့တာလို့ သငျးသငျးပွော ….. (ရုပျသံ) …..
အသံဖိုငျက ဝဠေုကြျောသှငျးခိုငျးလို့ သှငျးထားခဲ့တာလို့ သငျးသငျးက ပွောပါ တယျ …။
ကာမလိမျလညျမှုဖွငျ့တရားစှဲဆိုခံထားရတဲ့သရုပျဆောငျဝဠေုကြျောနဲ့တရားလိုသငျးသငျးတို့ရုံးခြိနျးမှာတော့ပွီးခဲ့တဲ့တပတျကဝဠေုကြျောတငျသှငျးခဲ့တယျဆိုတဲ့အသံဖိုငျသကျသတေခုအကွောငျးကအမြားကွားမှာပွောစရာတခုအဖွဈပြံ့နှံ့နတောပဲ ဖွဈပါ တယျ …။
ဒီလိုအှနျလိုငျးပျေါမှာပြံ့နှံ့နတေဲ့သမီးရညျးစားအသံမြားပါဝငျတဲ့အသံဖိုငျကတော့ဝဠေုကြျောကအသံသှငျးခဲ့တာကွောငျ့သငျးထားခဲ့တာဖွဈတယျလို့ သငျးသငျးကပွောပါတယျ …။
“ဒီအသံဖိုငျက ဝဠေုကြျောသှငျးခိုငျးလို့သှငျးပါတယျ။ဝဠေုကြျောမှာလညျးဒီအသံဖိုငျရှိပါတယျ။ကိုယျနဲ့သူနဲ့ကွိုကျခဲ့တုနျးက ခဈြသူရညျးစားလေ စပှနျဆာထားနတောမဟုတျဘူး။ ခဈြသူရညျးစားပွောတဲ့အတိုငျးလိုကျလုပျပေးခဲ့တာအဲဒါမှားလို့လား ….?
ဒီမှာရှိတဲ့သူတှလေညျးကိုယျ့လိုမိနျးကလေးမြိုးတှသေမီးရညျးစားထားရငျသိလိမျ့မယျလို့ထငျပါတယျ။အဲဒါလေးပွောပွခငျြတာပါ” လို့ တရားလိုဖွဈသူ အလှမယျသငျးသငျးကပွောပါတယျ …။
မိနျးမတယာကျအနနေဲ့အရှကျသိက်ခာအကခြံပွီးကိုယျ့သဘောဆန်ဒနဲ့အသံသှငျးထားမှာမဟုတျဘဲခဈြသူရညျးစားဖွဈခဲ့တဲ့အခြိနျဖွဈတာကွောငျ့ ပွောတာကို လုပျခဲ့တာဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ …။
“အသံဖိုငျကဝဠေုကြျောဖမျးခိုငျးလို့ဖမျးတာ။ဝဠေုကြျောဆီမှာလညျးရှိတယျ။သငျးသငျးဆီမှာလညျးရှိတယျ။ကိုယျ့ထကျသိတတျနားလညျတာတှရှေိလို့ ကမြရှနေ့ကေိုအကုနျပေးထားပွီးသား။ သူလိုအပျလို့သူတငျတာလေ။ ကမြနဲ့ပတျသကျခဲ့စဉျက ခဈြသူတယောကျအနနေဲ့ ဘာလုပျပါညာလုပျပါဆိုတော့ ကမြလုပျမှာပေါ့။ ခဈြကွိုကျနတေဲ့အခြိနျေ …။
ဒါတောငျဗီဒီယိုရိုကျခငျြတာလေ။ မွနျမာမိနျးကလေးတယောကျအနနေဲ့ရှကျလို့။ အဲဒီအသံဖိုငျလေးကိုခှငျ့ပွုလိုကျတာ ” လို့ သငျးသငျးကပွောပွ ပါ တယျ …။
ယနဇှေ့နျလ၅ရကျနရေုံ့းခြိနျးကိုတော့စှပျစှဲခံသူဝဠေုကြျောဘကျမှပကျြကှကျခဲ့ပွီးဝဠေုကြျောရဲ့ရှနေ့မှေလညျးတရားရုံးတှငျ ရုံးကငျးလှတျခှငျ့ကို တငျသှငျးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ …။
“သူတို့ဘကျကအမှုကိုအမွနျပွီးခငျြတယျလို့ပွောတယျ။ရုံးကငျးလှတျခှငျ့တငျတယျ။ရုံးကိုအစကတညျးကမလာခငျြဘူးဆိုရငျဝဠေုကြျောကတရားခံဖွဈတဲ့အတှကျဒီပွဈမှုကိုမကြူးလှနျနဲ့ပေါ့။အဲဒါပဲပွောခငျြတာပါ။သူ့မှာလညျးလူမှုရေးရှိသလိုကမြမှာလညျးရှိတယျ။ ကမြတို့က ပိုဆိုးပါတယျ။ ဘဝသမားတှပေါ။ တနလေု့ပျမှ တနစေ့ားရတဲ့ဘဝ …။
ကမြတောငျရုံးခြိနျးမှနျအောငျတကျနိုငျသေးတာပဲ။ရှနေ့တေယောကျအနနေဲ့မလုပျသငျ့ဘူးထငျတယျ။ဒီလြှောကျလဲခကျြကိုပယျဖကျြမှာပဲ” လို့ သငျးသငျးကပွော ပါ တယျ …။
တဖကျကရှနေ့ရေဲ့တရားခှငျမှာမဆငျမခွငျပွောတဲ့စကားမြားကွောငျ့သငျးသငျးဘကျမှတရားရုံးပွောငျးဖို့အထိဆုံးဖွတျထားတယျလို့ လညျး သိ ရ ပါ တယျ …။
“သငျးသငျးကတရားသူကွီးကိုယုံတယျ။သူ့ရဲ့သီလသမာဓိသိက်ခာကိုယုံတယျ။အမှနျတရားယုံတယျ။အမှနျတရားအသှားတယျ။တိုငျမယျဆိုရငျလညျးတဖကျကရှနေ့ကွေောငျ့တိုငျမှာပဲ။တဖကျကရှနေ့လေညျးစကားကိုဆငျခွငျပွောပါ။တရားခှငျမှာဆငျခွငျမပွောလို့ ဒီတိုငျးဆကျသှားမယျဆိုရငျ ရုံးပွောငျးဖို့အထိဆုံးဖွတျထားပါတယျ။ ရုံးပွောငျးပွီးရငျတိုငျမှာပါ” လို့ သငျးသငျးကပွောပါတယျ။
အဆိုပါအမှုကိုတော့ အလှမယျသငျးသငျးမှ ဇနျနဝါရီ၈ရကျနကေ့စတငျတရားစှဲဆိုခဲ့တာဖွဈပွီးဝဠေုကြျောကတော့ငှကေပျြ သိနျး၅ဝဖွငျ့ အာမခံရယူကာ အမှုရငျဆိုငျနဆေဲဖွဈပါတယျ …။
နောကျတကွိမျရုံးခြိနျးကိုတော့ ဇှနျလ ၁၉ရကျနကေို့ ပွနျလညျခြိနျးဆိုထား တာပဲ ဖွဈပါ တယျ …။ ။
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာပြီးနောက် ရွာထဲမှာ မြေကြီးတွေ အက်ကွဲလာလို့ ရွာသူရွာသားတွေ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြ
​ဖောက်​ပြန်​ဖို့​သေချာသ​လောက်​ရှိတဲ့ ​မိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံစံ ( ၅ ) မျိုး…